रमेश प्रसाई ,श्वेता खड्काको बिहे ! रमेश ३ वर्ष देखि गहिरो प्रेममा,२२ गत्ते जुर्यो लगन Shweta, Ramesh -
Home News रमेश प्रसाई ,श्वेता खड्काको बिहे ! रमेश ३ वर्ष देखि गहिरो प्रेममा,२२...
रमेश प्रसाई ,श्वेता खड्काको बिहे ! रमेश ३ वर्ष देखि गहिरो प्रेममा,२२ गत्ते जुर्यो लगन Shweta, Ramesh
सामान्यतया पुँजी बजारले कम्युनिस्ट अर्थमन्त्रीलाई विश्वास गर्दैन । लगानीकर्ताहरू आम कम्युनिस्ट अर्थमन्त्रीहरू खुला बजार अर्थतन्त्रका विरोधी हुने र निजी क्षेत्रलाई हस्तक्षेप गर्न खोज्ने प्रवृत्तिका हुने मान्यता राख्छन् र उनीहरूको कार्यकालमा बजारले गति लिन नसक्ने ठान्छन् । नेपालको पुँजी बजारको इतिहासलाई हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ ।दसवर्षे सशस्त्र यु’द्ध गरेर संविधानसभाको पहिलो चुनावबाट माओवादी सत्तामा आएपछि पुँजी बजार सशंकित बन्यो । त्यही बेला अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सेयर बजारलाई ‘जुवाघर’ भनेपछि ठूलो हलचल मच्चियो ।
लगत्तै उनले ल्याएको बजेटमा सेयर बिक्रीबाट प्राप्त हुने नाफामा लाग्ने करको दर दोब्बर बढाएर १० प्रतिशत बनाए । त्यतिबेला ११ सय २५ को उच्चतम बिन्दुमा पुगेको नेप्से परिसूचक दिनहुँजसो ओरालो लाग्ने क्रम सुरु भयो ।यो घटनामा मात्र होइन, अन्य बेलामा पनि पुँजी बजारले कम्युनिस्ट अर्थमन्त्री बनेका बेला सहज महसुस गर्दैन । वर्षमान पुन अर्थमन्त्री बन्दा नेप्सेले गणतन्त्र स्थापना भएयताकै न्यूनतम बिन्दु २ सय ९० लाई छोयो । भरतमोहन अधिकारीको पहिलो कार्यकालमा बजार सानो थियो । उनको दोस्रो कार्यकालमा पनि बजार उल्लेख्य रूपमा बढ्न सकेन ।
सुरेन्द्र पाण्डे, कृष्णबहादुर महराका पालामा पनि पुँजी बजार घटबढ भइरह्यो । पछिल्लो समय विज्ञ भनेर चिनिएका पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पनि बजारले विश्वास गर्न सकेन । तर, यो सवालमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भने भाग्यमानी ठहरिए ।कम्युनिस्ट अर्थमन्त्री भए पनि पौडेललाई पुँजी बजारले विश्वास गरिरहेको छ, त्यो पनि दोस्रोपटक । केपी शर्मा ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकालमा पौडेल अर्थमन्त्री बन्दा पुँजी बजार सूचक नेप्सेले १८ सय ८१ अंकको ऐतिहासिक बिन्दु छोएकोे थियो । पौडेलपछि पनि धेरैजना अर्थमन्त्री भए । तर, पुँजी बजारले सबैलाई विश्वास गरेन ।
नेप्से परिसूचक घटबढ हुँदै ११ सय बिन्दुसम्म ओर्लियो । लगानीकर्ताले पुँजी बजारलाई माथि उठाउन धेरै कोणबाट आवाज उठाए, रुवाबासी गरे तर अर्थमन्त्रीहरूले सुनेनन् ।दुई तिहाइको जनमतका साथ विज्ञ भनिएका खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा पुँजी बजारले गति लिने विश्वास गरिए पनि उल्टो भयो । पुँजी बजारबारे बेलाबेलामा आउने खतिवडाका टिप्पणीले बजारलाई घटाउने काम ग¥यो । अर्थमन्त्रीको दोस्रो कार्यकालमा भने खतिवडाको धारणामा परिवर्तन देखाप९यो । निजी क्षेत्र र पुँजी बजारबारे उनले सकारात्मक मात्र भनाइ राखे । परिणाम बजारमा सुधारका केही संकेत देखिए । नागरिक
Previous articleभर्खरै सरकारले गर्यो यस्तो बोल्ड निर्णय, कोरिया जान नपाएकाहरुका लागि ठूलो खुशीको खबर South Korea
Next articleबिजय शाही लामो समय पछी मिडियामा ! वर्ल्ड रेकर्ड राखी सके, अबो अरुलाई सिकाउछु भन्दै गरे यस्तो खु*लसा